Fakafaka: “Hainay ny mivarotra ny bokinay…” | NewsMada
Fakafaka: “Hainay ny mivarotra ny bokinay…”
Tao anatin’ny andro maromaro, nahafinaritra ery ny fifaneraseran’ny mpitia vakiboky tao anaty facebook. “Ireo ny boky efa novakiko… Sao mba manana an’ity ianareo, sns”!… Nandingana andro vitsivitsy: “Ary toy ny bokiko io amidin-dRanona amin’ny sarany ambany dia ambany io!… loza izany!”. Nanjary varo-boky an-kitsirano be izao ilay fifanakalozana, tetsy aloha. Vokatr’izay, raikitra ny menomenona: “Varotra tsy nahazoana alalana taminay tompony akory io ataon’ilay olona io!… Tsy mety mihitsy ny tahaka izao satria toy ny fanaovana piraty ihany…”.
Ho an’ny mpanoratra iray: “misarintsarina halatra ny tahaka izao, noho izany, tsy tokony hatao. Hainay ny mivarotra ny bokinay ato anaty facebook fa tsy mila mpanelanelana izahay”. Amin’ny lafiny iray, mahavariana tokoa ny fizotry ny tsenam-barotra mianjady amin’ny tontolon’ny boky ao anatin’ny tambajotra facebook satria boky amidy 15 000 Ar eny amin’ny fivarotam-boky, zara raha amidy 2 000 Ar ao anaty facebook. Amin’ny lafiny hafa indray, toa mamaky boky ihany ange izany ny Malagasy satria “mihodina vetivety ny sera” e!
… Ho an’ny mpanoratra, toa zary manamaivana ny asa soratra ny tranga tahaka izao. “Varo-boba tsy mendrika ny hasasaranay sy ny hatsembohanay sy ny vola laninay no ataon’ireny olona anaty facebook ireny”, hoy ny ankamaroan’ireo izay iharan’ity tranga ity. Mifanakaiky amin’io ihany koa ny teny nambaran’ireo mpikirakira rohim-boky isan-karazany (mpanonta, ny edisiona, ny mpivarotra, sns): “misy lalana tokony hodiavin’ny boky iray vao tonga eny am-pelatanan’ny mpanjifa izy ireny. Voadingana avokoa anefa ireo. Very ny zon’ny tsirairay…
Tsy mifidy fa rehefa mety ho boky, tazana amidy ao anaty facebook avokoa. Tsara ny fivelarana sy ny fampirisihana ny olona hamaky boky, saingy lesoka kosa ny fanaovana izany tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy (lalana, fifampiresahana amin’ny tompon’ny sanganasa, sns). Mila arindra ireo mba hitera-boka-tsoa ny tranga tahaka itony!